किशोरी हत्या प्रकरणः मंगलबार राति ८ बजेदेखि कर्फ्यू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १२, २०७५ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — १३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या घट्नाको अनुसन्धानको माग गर्दै चर्केको आन्दोलन पश्चात् तनावग्रस्त बनेको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू मंगलबार पनि राति ८ बजेदेखि बुधबार बिहान ४ बजेसम्म लाग्ने भएको छ ।
सोमबारदेखि दिनमा लगाइदै आएको कर्फ्यूहटाएपनि रातिको समयमा भने जारी नै गरिएको हो ।
‘अवस्था सहज बन्दै गएका कारण अहिले राति मात्रै कर्फ्यूलगाउने निर्णय भएको हो’ कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले भने, ‘सामान्य बनेपछि कर्फ्यूपूर्ण रुपमा हटाइनेछ ।’ सोमबार पनि साँझ ६ देखि मंगलबार बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यूलगाइएको थियो ।
गत शुक्रबार प्रदर्शकारीमाथि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर १ बालकको मृत्यु पश्चात् असहज परिस्थिति सृजना भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यूलगाएको हो ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:१४
भाद्र १२, २०७५ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — एक महिनाभन्दा बढी समय उपचारमा राखेको एक नाबालकको अन्तत् बायाँ हात काटिएको छ । अभिभावकले चिकित्सकको लापरवाहीले हात काट्नु परेको आरोप लगाएका छन् भने चिकित्सकले मृत्युको मुखमा पुगेको बच्चालाई बचाइएको बताएका छन् ।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका ८ डुम्राहाबस्ने गोकुल विश्वकर्माले जन्मेको तीन दिनमै नाबालक छोरालाई गत जेठ २७ गते विराटनरको आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलमा भर्ना गराएका थिए। २६ सातामा जन्मेको बच्चालाई उपचारको लागि राखेको २८ दिनसम्म सघन उपचारकक्षमा राखेपछि उक्त अस्पतालले काठमाडौंस्थित कान्तिबाल अस्पतालमा रिफर गरेको थियो।
बच्चाका बाबु गोकुल र आमा अनिताले आफुहरुलाई अस्पतालले सुधार हुँदै छ भन्ने गरेको र झ्यालबाट मात्र हेर्न दिएको बताएका छन्। अस्पतालले २८ दिनपछि कान्तिबाल अस्पतालमा लैजान भनेको र त्यहाँ पुगेपछि मात्र छोराको हातको हड्डीसमेत कुहिएकाले सल्यक्रिया गरिदिन लेखि पठाएको थाहा पाएको उनीहरुले बताएका छन्।
‘मेरा सपाङ्ग जन्मेका छोरालाई अस्पतालले अपाङ्गा बनाइदिए। पैसा तिर्न सकिन्जेलसम्म आइसियुमा राखे। हाम्रो पैसा सकेपछि थप उपचारकालागि बाहिर लैजाउ भनेर कान्तिबाल अस्पतालमा रिफर गरे' गोकुल भन्छन्। उनले आरके हस्पिटलले नै कान्तिमा लैजान एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिएको र २० हजार रुपैया दिएर अरुलाई नभन्न समेत सुझाएको बताए।
आरके हस्पिटलका प्रसासकीय अधिकृत धिरज मैनालीले भने चिकित्सकको लापर्वाही नभएको दावी गरे। ‘अस्पतालमा बच्चा ल्याउँदा सात महिना पुरा नभएको अवस्था थियो। क्रिटिकल अवस्थामा ल्याएकाले भेण्टीलेटरमा राखेर उपचार गरेका थियौं। तर, २६ औं दिनमा बच्चाको देव्रे हात कालो भएको देखिएपछि संक्रमणको थप उपचार गर्न कान्तिबाल अस्पतालमा रिफर गरिएको हो’ उनले भने।
उपचारमा संलग्न बालरोग चिकित्सक डा. सुवोध शर्माले हात काटेर भएपनि बच्चाको ज्यान बचाएको बताए। उनका अनुसार सुरुमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेको बच्चा त्यहाँ आइसियु वेड भरिएकाले आरकेमा ल्याएका हुन्। 'यहाँ ल्याउदा बच्चाको हात, खुट्टा पुरै लुलो अवस्थामा थियो। महिना नपुगि जन्मेकाले बच्चाको शरिरको आन्तरिक अंगहरु पुरा विकास नहुने हुँदा राम्ररी स्वास लिन सकेको थिएन' डा. शर्मा भन्छन्, 'हामीले तत्कालै भेण्टीलेटरमा राखेर उपचार सुरु गरेका थियौं। नौ दिन पछि सुधार आएको देखियो। तर, फेरि बच्चाको देव्रे हात निलो भयो।'
उनले अस्पतालमा पेडियाट्रिक सर्जरीको सुविधा नभएकाले कान्ति बाल अस्पताल रिफर गरिएको बताए। उनका अनुसार महिना नपुगि अर्थात २६ सातातिर जन्मेका बच्चालाई संसारमै ४० प्रतिशतमात्र बचाउन सकिने तथ्याङ्क छ। बाँचेपनि अधिकांशको कुनै न कुनै अंगमा केही न केही कमजोरी हुने पनि उनले बताए।
विक दम्पतिले भने कान्ति बाल अस्पतालमा पुर्‍याएपछि मात्र आफुहरुलाई आरके अस्पतालले बच्चाको देव्रे हातमा संक्रमण भएकाले काम नलाग्ने अवस्था भएको, हड्डी पनि कुहिसेको र हातको सल्यक्रिया गरिदिन भनेर रिफर गरेको जानकारी पाएको बताए। 'यसअघि त हामीलाई सुधार हुँदैछ मात्र भन्थे' गोकुलको भनाई छ, 'उपचार गराउने पैसा सकिएपछि हामीलाई अन्तै लैजान भनियो।' उनीहरुका अनुसार बच्चाको उपचारमा आरके अस्पतालमा मात्र करिव ४ लाख खर्च भएको छ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १४:४६